Dhirta reer Brazil ee halista ugu jirta baabi'inta | Safarka Absolut
Dhirta reer Brazil ee halista ugu jirta baabi'inta
Brasil Waxay u dhacdaa inay noqoto waddanka ugu cagaaran Koonfurta Ameerika, oo ah dhul ballaadhan oo dabiici ah iyo kala duwanaansho kala duwan oo aan caadi ahayn. Si kastaba ha noqotee, hantidan weyn ayaa si halis ah loogu hanjabay, gaar ahaan flora Brazil.
Daraasad laga sameeyay sanado qaar wadanka Koofurta Ameerika ayaa lagu qiyaasay tirada noocyada dhirta ee hanjabaada ah 2.118. Kaliya intaas maahan: sidoo kale, sida uu qabo bayoolaji caan ah oo reer Brazil ah Gustavo Martinelli, iskuduwaha Buugga Cas ee Flora ee Brazil (2013), ee heerka baabi'inta noocyada ayaa aad uga dhakhso badan sidii la moodayay dhawr sano ka hor.
Martinelli wuxuu waday shaqo titanic ah oo ah diiwaan gelin iyo kala soocid hantida dhirta ee Brazil. Waxqabadyadooda waxaa sidoo kale lagu jiheeyaa kor u qaadista wacyiga bulshada iyo maamulada muhiimada ay leedahay wada hadalka ku saabsan hantidan.
Noocyo badan oo ka mid ah dhirta reer Brazil ayaa lagu soo daray Liiska Cas ee Ururka Caalamiga ee Ilaalinta Dabeecadda (IUCN). Si kastaba ha noqotee, marka la eego cilmi-baarista cusub, liiska dhabta ah ayaa aad u ballaadhan.
Khubarada ayaa ku qiyaasaya in keymaha reer Brazil ay wali ku dhuumaaleysanayaan noocyo badan oo aan la ogaanin. Noocyadani waxay u dhexeeyaan 10% iyo 20% ee dhirta dhabta ah ee reer Brazil. Waxa xiiso leh, heerka aqoonsiga noocyada cusub ayaa aad uga gaabiya marka loo eego xaddiga la waayey ee noocyada la yaqaan.
ka sababaha keenay dabar goyntaas tirada badan waa la yaqaan. Waxaa lagu soo koobi karaa saddex:
Geedaha aan loo kala soocin ee ujeedooyinka beeraha.
Xaalufinta dhirta oo ku xiran magaalaynta meelaha cusub.
1 Noocyada dhirta ee loogu hanjabay Brazil
1.2 Baraasiil (Syngonanthus brasiliana)
2 Badbaadso dhirta reer Brazil
Noocyada dhirta ee loogu hanjabay Brazil
Noocyada loo hanjabay ee dhirta reer Brazil ayaa loo kala saaray sidii afar koox sida ku cad heerka hanjabaada. Kala soociddan waxaa loo sameeyay iyadoo lagu saleynayo shuruudaha hoos u dhaca heerka, tirada dadka, aagga juqraafi ahaan loo kala qeybiyo iyo heerka kala qeybsanaanta dadweynaha.
Tani waa liis kooban oo ka mid ah noocyada astaanta u ah ee ugu hanjabay baabi'inta:
Andrequice (Alonemia effusa)
Sidoo kale loo yaqaan magacyo kale sida campinchorao, aveia ha la xiro o india samambaia. Waa geed leh muuqaal aad u bamboo u eg oo dhaqan ahaan ka baxa gobollada xeebta ee Brazil. Maanta wuxuu ku jiraa khatar aad u daran.
Brasiliyaan (Syngonanthus brasiliana)
Mid ka mid ah noocyada halista ku jira ee Brazil ayaa si hufan u ah kan dalkan u bixiya magaciisa. Alwaaxa ay u adeegsadeen deganayaasha reer Bortuqiisku soo saarista midabbada iyo soo saarista aaladaha muusikada qaarkood.
Laamaha Jacaranda ee Baia
Geedka loo yaqaan 'Endemic geed' ee ubaxa reer Brazil oo qoryihiisu aad loo qiimeeyo. Geed aan kala sooc lahayn ayaa yareeyay tirada tijaabooyinka illaa inta ay le'eg tahay.
Warshad Shrubby oo soo saarta berry leh waxyaabo faa iido badan u leh caafimaadka. Warshaddan, oo ay isku qoys yihiin geedaha bukaa, waxay halis weyn ugu jirtaa in lagu waayo dalka Brazil.
The paininha oo leh ubaxyo casaan iyo jaale dhalaalaya ah. Nooc khatar ku jira.
Xanuunka (Trigonia bahiensis)
Geed leh ubax casaan iyo jaale qurux badan leh oo joogitaankooda gobolada xeebta si weyn hoos loogu dhigay sanadihii la soo dhaafay.
Noocyo ka mid ah timirta cufan oo leh jir khafiif ah oo ka baxa qaybo ka mid ah koonfurta dalka. Geedihii waaweynaa ee timirta ahaa ee beri hore ayaa maanta ku xaddidan joogitaanka markhaati.
Pinheriro do Paraná ama Araucária: geedkii "Baraasiil" ee halista ugu jiray in la waayo.
Noocyada geedka qoyska ka mid ah Auraucariaceae ku qoran sida flora nugul. Geedkan reer Brazil, sidoo kale loo yaqaan curi, wuxuu gaari karaa 35 mitir oo dherer ah Asal ahaan waxay u fidisay qaab aad u fara badan oo kaymo badan koonfurta dalka. Dib udhacyadeedii tobanaankii sano ee la soo dhaafay waxay ahayd mid layaableh.
Geed ka yimid gobolka Amazon dheecaankiisa cas, oo lamid ah dhiiga, ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo waxyaabo badan oo caafimaad iyo qurux.
i daawo mar dhow (hirsute camarea)
Geedka caanka ah ee "dunta madow", oo mar aad u tiro badnaa, ayaa ficil ahaan looga waayey dalka.
Dhirta dhirta, khatarta ku jirta
Geed ubax-casaan leh oo muuqaalkiisa ugu caansan uu yahay jiridiisa iyo caleemaha "timo". Qarni ka hor waxaa loo qaybiyey guud ahaan waddanka oo dhan, maanta waxay ku sii noolaanaysaa oo keliya meelaha la ilaaliyo qaarkood.
Badbaadso dhirta reer Brazil
Waa cadaalad in la yiraahdo dadaallo muhiim ah ayaa la fulinayaa oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo dhirta reer Brazil. Brazil waa saxiix Heshiiska Kaladuwanaanta Noolaha iyo Bartilmaameedyada Aichi (2011), ballanqaad caalami ah oo hami leh si looga hortago dabargoynta noolaha halista ku jira.
Tallaabooyin kale oo badan, dowladda federaalka ayaa daabacday dhowr sano ka hor a Meelaha mudnaanta leh, qaar badan oo ka mid ah oo horeyba u helay a heerka ilaalinta gaarka ah. Mana aha oo kaliya in la badbaadiyo dhirta, laakiin sidoo kale xayawaanka dalka.
Dhammaan mashaariicdan ilaalinta ah, ayaa tiknoolaji door muhiim ah. Waad ku mahadsan tahay, waxaa suurtagal ah in lagu keydiyo miraha dhirta loo hanjabay si loogu isticmaalo mustaqbalka deegaannada la soo kabsaday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhirta reer Brazil ee halista ugu jirta baabi'inta
Dabeeto Dutch iyo macmacaan